१० रुपैयाँमा छानी छानी कपडा किन्नेको भिड । हेर्नुहोस भिडियो – Gorkhali Dainik
१० रुपैयाँमा छानी छानी कपडा किन्नेको भिड । हेर्नुहोस भिडियो
March 30, 2021 39
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो एकदम साचो कुरा हो काठमाडौंको गोङ्गबु बसपार्क देखि २००”मितर भित्र पर्ने सुखाबति स्टोरमा १० रुपैयाँमै छानी छानी कपडाहरु पाइन्छ्न त्यसको लागि तलको भिडियो हेरेर जानकारी लिनुहोला।।।कोरियामा लामो समय बसेर नेपाल फर्केका चिजमान गुरुङले संचालन मा लिउनुभएको हो।।। यो पसल मा विशेष गरि निम्न आय भएको मानिसहरुलाइ ध्यानमा राखेर खोलिएको छ।।।
श्रीमानले छो’डेर गएपछि सानो सन्तानलाई हुर्का’उन उनले गरेको सं’घर्ष नि ‘कै प्रेर’णादायी छ । उनको त्यही संघ’र्षको का’रण भाइरल भएकी थिइन् । अहिले उनलाई एउटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने मौका मिलेको छ । उनको काम अनुसारको भूमिका रहेको कलाकारहरुले बताएका छन् । उनलाई म्युजिक भिडियोमा पनि चिया बेच्ने महिलाकै रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पाँच महिनाको प्रेम पछि उनले विवाह गरेकी थिइन् । तर जिवन उनले सोचे जस्तो भएन । श्रीमानले छोडेर गएपछि उनको जिवन निकै कठि’न भयो । प्रेम गरेर विवाह गरेका श्रीमानले अ’प्ठेरोमा पारेर गए ।तर सन्तानलाई त हु’र्काउनै पर्यो, आफ्नो पेट पनि पाल्न पर्यो । श्रीमान सुनधारामा बस्ने गरेको र ठेक्काको काम गर्ने गरेको उनले बताइन् । कहिले काँही फोन त गर्थे तर कहिल्यै माया देखाएनन् । हेर्नुहोस चियावालिको पहिलो गीत –
सामाजिक सञ्जाल’मा भाइरल भएकी एक संघर्षशिल महिला अब म्युजिक भिडियोमा पनि देखिने भएकी छन् । सानो सन्तानलाई पिठ्यु’मा बोकेर विहानै ३ वजे देखि काममा खटिएकी महिलाका बारेमा युट्युववमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी भाइ रल भएकी थिइन्
Prevमेलम्चीको पानीको श्रेय कस्लाई दिने ? ओली , विना , भट्टराई ? अाफ्नो बिचार कमेन्ट गर्नुस
Nextप्रेमिले प्रेमिकालाई म’ट्टितेल ख’न्याएर लगाए आ’गो, अवस्था ग’म्भीर
तारे भीरमा ट्र्याक खोल्दै गरेको स्काभेटर चिप्लिएर झर्दा तीन टुक्रा ,चालकको टाउको र शरीर फरकफरक स्थानमा फेला